China FB-33 SPLIT SET BOLT (Stabilizer Friction Stabilizer) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | TRM
Dị ka ụdị nkwado ala Split Set Bolt ejiri mee na ngwa, Dia.33mm nwekwara ọkpọkọ C nke ọkpọ ahụ nke nwere ike ịnye ngwa ọgụ ngwa ngwa nke na -ejikọ nkume ọnụ, yabụ a na -ejikwa ya ebe niile na ogbunigwe, ọwara mmiri na mkpọda. wdg Agbanyeghị, ka ọ dị ugbu a, ike ihe na njiri mara ya na ịdị mma welds n'etiti mgbanaka na eriri C, ghọrọ isi ihe dị na mkpọchi.
FB-39 Split Set bolt bụ obere nkwado nkwado ala ejiri na ngwa ahụ, nke a na-ejikarị dị ka nkwado ala nwa oge. Agbanyeghị, ogo welds ihe ka dị ezigbo mkpa iji jide n'aka na ọ ga -erute nkwado nkwado. Site n'iji otu igwe mpịakọta na welders mee FB-33 Split Set Bolt, anyị nwere ike nweta ikike dị irè na mmepụta anyị.
Site n'iji uru anyị PLC-Controled Rollformer na Auto Welders, Anyị na-agbaso otu usoro njikwa ịdị mma iji mee ka FB-33 Split setịpụrụ bolt ọbụlagodi na ọ bụghị maka nkwado nkwado ala, yana ojii na galvanizing gbawara agbawa setịpụrụ nwere ike izute. ihe dị iche iche chọrọ nke ndị ahịa si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa.
Isi ihe dị mkpa maka FB-33 kewara bolt (Friction Bolt Stabilizers) ka bụ welds, nke ga-emetụta arụmọrụ bolt mgbe ejiri ya na nkwado ala. Anyị nwere usoro nlebara anya na ịdọ aka na ntị oge niile iji nweta ịdị mma na ịdị mma welds zuru oke, na onye njem ọrụ nwere ihe nnwale nnwale ga -agafe usoro niile iji zere ihe ọghọm ọ bụla na mmepụta.
Ọ bụrụ na onye ahịa chọrọ mkpọchi setịpụrụ FB-33, mkpuchi zinc ka bụ isi ihe dị mkpa, ọkwa Si & P dị na ihe dị mkpa dị ezigbo mkpa idobe elu mkpuchi zinc ka ọ nwee arụmọrụ ka mma mgbe ejiri ya na corrosive. gburugburu ebe obibi. Nkwakọba ọkọlọtọ maka FB-33 Split set bolt bụ 300 untis kwa pallet osisi ma ọ bụ igwe.
Nkọwapụta FB-33 SPLIT SET BOLT NA IHE MERE.
Ịkpọchi dayameta A 33mm Ike Nweta Nkeji 345 Mpa (70KN) Akwadoro Nkịtị Bit nkịtị Ogologo: 31-33 mm
Ogologo mkpọchi B 0.6-1.8m Ahụkarị 445Mpa (95KN)
Taper End dayameta C 28mm Tube Ultimate Tensile Ike Nkeji 470 Mpa (100KN) Ahụkarị Ịgbaji Ike 107KN
Taper oghere Wide D 2mm Ahụkarị 530Mpa (115KN)
Ogologo Taper E 65mm Mass kwa Mita 1.67 n'arọ Nkeji Ịgbaji Ike 71KN
Kpọchie oghere Wide F 12mm
Ebe mgbanaka G 3mm Mpaghara Mpaghara Cross 212mm² Anchorage mbido akwadoro 3-6 Tọn (27-53 KN)
Mgbanaka Wire Ring I 6mm Oghere Oghere Oghere Ogologo: 30-32 mm Mgbatị Axial kachasị Ahụkarị 21% (Thk <16mm)
FB33-0600 Gbasaa Bolt 33-600 33 600 Emeghị ọgwụgwọ 1.00 300 -
FB33-0900 Gbasaa Bolt 33-900 33 900 Emeghị ọgwụgwọ 1.50 300 -
FB33-1200 Gbasaa Bolt 33-1200 33 1200 Emeghị ọgwụgwọ 2.00 300 -
FB33-1500 Gbasaa Bolt 33-1500 33 1500 Emeghị ọgwụgwọ 2.50 300 -
FB33-1800 Gbasaa Bolt 33-1800 33 1800 Emeghị ọgwụgwọ 3.00 300 -
FB33-0600G Gbasaa Bolt 33-600 HDG 33 600 Itinye Hot Galvanized 1.05 300 -
FB33-0900G Gbasaa Bolt 33-900 HDG 33 900 Itinye Hot Galvanized 1.58 300 -
FB33-1200G Gbasaa Bolt 33-1200 HDG 33 1200 Itinye Hot Galvanized 2.10 300 -
FB33-1500G Gbasaa Bolt 33-1500 HDG 33 1500 Itinye Hot Galvanized 2.63 300 -
FB33-1800G Gbasaa Bolt 33-1800 HDG 33 1800 Itinye Hot Galvanized 3.15 300 -
FB-33 SPLIT SET BOLT atụmatụ
Emere ya site na ọkwa dị iche iche nke warara nchara, dabere na gburugburu ojiji dị iche iche yana ihe dị iche iche chọrọ n'aka ndị ahịa nke enwere ike ịhazi ọnụ ahịa nkwado ala na ngwa ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ na -eji dị ka ụdị nkewa nkewa setịpụrụ bolt maka nkwado ala, ọ nwere otu ụdị ahụ C nke nwere mkpọchi nkwado ndị ọzọ ma nwee otu ọrụ na njirimara iji nye nkwado ala zuru oke ogologo oge ruo oghere, na -eji ya na ntupu na efere iji nweta ngwa ngwa
Ajụjụ nke FB-33 SPLIT SET BOLT
1. Kedu ihe bụ FB-33 Split Set na kedu ka o si eme?
A na-eme FB-33 Split Set Bolt site na ọkwa dị iche iche nke warara nchara, nke a na-atụgharị ka ọ bụrụ eriri ogologo C ogologo ogologo ya niile. A na -agbanye mgbanaka nchara na njedebe nke tube site na ngwaọrụ ịgbado ọkụ akpaka, nke bụ idobe efere ahụ n'elu okwute.
2. Gịnị bụ ọrụ FB-33 Split Set yana otu esi enweta nkwado ala?
Olu akwa na -adọba na njedebe mgbanaka na -enyere aka ịnwale ibu n'oge nrụnye mkpọchi. Enwere ike ịtinye ngwụcha ngwụcha nke mgbachi mgbachi n'ime oghere ndị a gbapuru. Enwere ike itinye bọmbụ esemokwu na ngwa ejiri aka.
Nke gara aga: EKPERE COMBI (Ejiri ya na Spt Set Bolt)
Osote: FB-39 SPLIT SET BOLT (Onye na-ese okwu)
Fb33 Gbawara Ntọala Bolt
Fb33 Split Set Bolt Onye nrụpụta
Fb39 Split Set Bolt Onye nrụpụta